Anti-human trafficking program - The Fifth Pillar
April 27, 2020 July 3, 2020 admin	0 Comments
The Fifth Pillar is implementing Anti-human Trafficking and Legal Awareness project in Yangon division and Eastern Shan State. In order to function an effective service to the people, TFP has conductedameeting with donor organization, USAID and set upasub-office at Tachileik. Thus, the legal service for anti-human trafficking and public awareness raising program will be available at TFP Yangon and Tachiliek offices.
TFP is ready to consult, help and serve people regarding with human trafficking, safe migration and so on. For detailed information call us at 09428216702, 09965052466 (Yangon) or 09250634871, 09899406379 (Tachiliek) in office hours or visit C1, room 301, Highway Complex, Kamayut, Yangon. (or) no.2/113, May Flower Field, City road, Tachiliek, Eastern Shan State.
TFP သည် “လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနှင့် ဥပဒေအသိပညာတိုးမြှင့်ရေး” စီမံကိန်းတစ်ခုကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့) တို့တွင် အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုစီမံကိန်းကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ပေးမည့် USAID အဖွဲ့အစည်းနှင့် အစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အများပြည်သူများသို့ ထိရောက်သော ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် TFP ရုံးကို ရန်ကုန်ရုံးအပြင် တာချီလိတ်မြို့တွင် ရုံးခွဲတစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
ယခုကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစတင်၍ လူကုန်ကူးမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များ၊ လုံခြုံစိတ်ချစွာ ရွေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကိစ္စရပ်များ အတွက် အကြံဉာဏ်များ၊ အထောက်အပံ့များ ပေးနိုင်ရန် TFP မှ အဆင့်သင့်ရှိနေကြပါသည်။
TFP သို့ ဆက်သွယ်လိုပါက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး – အမှတ် (C-1)၊ အခန်း (301)၊ နှင်းဆီလမ်း၊ ယုဇန Highway Complex အိမ်ရာ၊ ကမာရွတ်။ ဖုန်း – 09428216702, 09965052466
ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့) -အမှတ် (၂/၁၁၃)၊ မေဖလားဝါးကွင်း၊ မြို့ပတ်လမ်းမကာဟိုခမ်ရပ်ကွက်၊ တာချီလိတ်မြို့။ဖုန်း – 09250634871, 09899406379#ChangeStartsWithYou!#TheFifthPillar
← ဒီနေ့မှာတော့ သင့်အသံ၊ သင့်မဲ ၊ သင့်အနာဂတ် စီမံကိန်း အကြောင်း သတင်းစကားပေးလိုပါတယ်။
Garment sector in Myanmar: A labour law training that brings workers and employers closer →